स्वास्थ्य – Annapurna Post News
May 18, 2022 sujaLeaveaComment on सबै महिलाले प्राय: गर्ने यी सामान्य गल्ती जसले आफ्नो पुरुष पार्टनरलाई नपुंशक बनाइरहेको छ
काठमाडौं । दैनिक जीवनमा त्यहाँ केहि कुराहरू छन्, जुन पुरुषहरूले मन पराउँदैनन् । तीमध्ये कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन ओछ्यानमा मात्रै गरिन्छ । कुनै पनि पुरुष साथिले त्यो महिला साथिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न चाहँदैन, जसले शारीरिक सम्पर्कका क्रममा केही सामान्य कुराहरू गर्छिन् । महिलाको कुराले केटाको बनेको मुड पनि अचानक बिग्रन्छ । त्यसैले प्रायः महिलाहरूलाई […]
May 15, 2022 sujaLeaveaComment on शरीरमा मुसा आउने कारण यस्तो छ, यसरी हटाउने (भिडियोसहित)
छालामा मुसा आएर हैरान पारेको छ ? मुसा के कारणले आउँछ र कसरी हटाउने वरिष्ठ छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा.संगीता बराल बस्नेतको राय यस्तो छ : छालामा देखिने समस्यामध्ये मुसा आउने समस्याले धेरैलाई सताएको छ । मुसा शरीरको सबै भागमा आउनसक्छ । तर विशेष गरेर हात, खुट्टा र पिडुँलामा बढी मुसा आउँछ । मुसा आउने […]
May 13, 2022 sujaLeaveaComment on चाहिनेभन्दा बढी प्रोटिन लिँदा यस्तो हुन सक्छ!
प्रोटिन प्राप्त गर्न, मांसपेशी तन्दुरुस्त बनाउन, तौल घटाउन अति उपयोगी हुने भन्दै, प्रोटिनयुक्त धुलो, झोलको प्रचार गर्ने गरिएको छ । तर के विज्ञापनमा देखाएको जस्तै काम गर्छ त प्रशोधित प्रोटिन पाउडर र झोलले ? प्रोटिन, प्रोटिन भनिरहँदा प्रोटिनको मात्रा बढी भएर स्वास्थ्यमा समस्या आउने पनि हुनसक्छ । कुन उमेर समूहको व्यक्तिलाई कति प्रोटिन आवश्यक पर्छ […]
सुत्ने बानीबेहोरामा केही सुधार गरे मानिसहरूले आफ्नो ‘शरीरको घडी’ मा परिवर्तन गर्न सक्ने र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यूके र अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले राति नसुतीकन सक्रिय रहने मानिसहरूमा एक अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार सधैँ एउटै निश्चित समयमा सुत्ने गरेमा, क्याफिन नखाएमा र बिहान पर्याप्त घाममा बसेमा निद्रासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ। सुन्दा […]
आजको समयमा बिग्रँदै गएको आसीन जीवनशैली, गलत खाने बानी, तनाव, चिन्ता, प्रदूषण आदिका कारण यौ’न स्वास्थ्य प्राप्त गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ । यी साना कारकहरूले यौ’न स्वास्थ्यमा धेरै नराम्रो प्रभाव पार्छ। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले भर्खरै गरेको अनुसन्धानले मोटोपन भएका वा व्यायाम नगर्नेहरूमध्ये ४३ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषहरू कुनै न कुनै यौ’न […]
May 12, 2022 sujaLeaveaComment on २० वर्षपछि महिलाको शरिरमा आउँने ६ परिवर्तन
महिलाको उमेरसँगै शरिरमा थुप्रै प्रकारको परिवर्तन आउने गर्दछ । यहाँ महिला २० वर्ष पार गरेपछि उनको शरिरमा कस्तो प्रकारको परिवर्तन आउँछन् भन्ने विषयमा जानकारी दिइएको छ । डन्डिफो-रः महिलाको शरिरमा हर्मोनमा परिवर्तनका कारण डन्डिफोर र छाला रुखो हुने स-मस्या हुनसक्छ । नि-प्पल पहिलेभन्दा भिन्न देखिनेः परिवर्तन सबैमा हुन्छ भन्ने छैन । तर धेरैजसो युवतीको नि-प्पलको […]
May 11, 2022 sujaLeaveaComment on समयमै उपचार गरे निको हुन्छ बालबालिकाको आँखामा हुने क्यान्सर
काठमाडौँ । विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सचेतना सप्ताह, २०२२ को सन्दर्भमा नेपाल पनि रेटिनोब्लास्टोमासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यही वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी सचेतना सप्ताह मनाइँदै छ । रेटिनोब्लास्टो भनेको बालबालिकाको आँखाको भित्री भागको पर्दा ९रेटिना०बाट पलाउने क्यान्सर हो र यो नवजात शिशुदेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा देखापर्छ । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले रेटिनोब्लास्टोमासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने […]
May 11, 2022 sujaLeaveaComment on कालो भएको गो’प्य यस्ता अ’ङ्ग गोरो बनाउनेको बजारमा भि’ड
एजेन्सी। थाइल्याण्डबासीमा यतिबेला एउटा वि’चित्रको शौख पलाएको छ। यसमा यति मानिस आकर्षित भएका छन्, जसका कारण प्रश्न उठेको छ कि के ब्युटी उद्योगले सबै ह’द पार गर्न लागेको हो। रु पुरुषको यो आ’कर्षण ‘गो’प्य पा’र्ट लाई गोरो बनाउने कोशिसमा बढेको हो। एसियाली मुलुकमा छालालाई गोरो बनाउने कोशिस नयाँ भने होइन, किनभने काला रङ्गको विषयमा यहाँ […]
May 10, 2022 sujaLeaveaComment on यस्ता लक्षणहरु देखिए तत्काल जचाउनुहोस् मिर्गौंला..
पछिल्ला वर्षमा वर्षेनी मिर्गौ’लाका बिरामी बढिरहे’का छन् । कतिपयले त नियमित चेकजाँच नगर्ने हुँदा मिर्गौ’लामा समस्या देखिएको निकै पछि मात्र आफूलाई मिर्गौलाको रोग भएको थाहा पाउँछन् । तर, जब थाहा हुन्छ, त्यति बेला मि’र्गौला निकै बिग्रिस’केको हुन्छ । त्यसो हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ, मिर्गौला ठिक छ वा छैन भन्ने कसरी थाहा पाउने त ? […]
May 3, 2022 sujaLeaveaComment on सबै महिलाले प्राय: गर्ने यी सामान्य गल्ती जसले आफ्नो पुरुष पार्टनरलाई नपुंशक बनाइरहेको छ